Raw NSI-189 Phosphate ntụ ntụ (1270138-41-4) - Phcoker
Raw NSI-189 Phosphate ntụ ntụ bụ ngwongwo neurogenic multi-domain nke nwere ụbụrụ-ọgwụgwọ nwere ikike …….
Nwunye NSI-189 Phosphate (1270138-41-4) video
Nwunye NSI-189 Phosphate (1270138-41-4) Nkọwapụta
Raw NSI-189 Phosphate ntụ ntụ bụ neurogenic na nootropic nyocha na-arụpụta site na nicotinamide na pyrazine. Ntugharị a na-achịkwa akara nke ọma gosiri na ọ na - akpali neurogenesis ma ọ bụ mmepụta mkpụrụ ndụ neuronal na ụbụrụ.
N'ọmụmụ anụmanụ, e gosipụtakwala ịba ụda hippocampus site na 20% si otú ahụ gbanwee mgbaàmà omume nke ịda mbà n'obi. Nnyocha dị otú ahụ egosiwo na ọ nwere ike ịbụ ọgwụgwọ dị irè maka ịda mbà n'obi.
A na-echekwa na NSS-189 phosphate ntụ ntụ bụ ọgwụgwọ na-ekwe nkwa maka ọnọdụ ndị ọzọ gụnyere nsogbu nrụgide post-traumatic (PTSD), ọrịa Alzheimer na nsogbu ndị metụtara afọ.
Nwunye NSI-189 Phosphate (1270138-41-4) Smmezi
Product Name Raw NSI-189 Phosphate ntụ ntụ
Chemical Aha UNII-HX0VO60T62;HX0VO60T62;AKOS030632361;Methanone,(2-((3-methylbutyl)amino)-3-pyridinyl)(4-(phenylmethyl)-1-piperazinyl)-, phosphate (1:1)
Brand Name Raw NSI-189 Phosphate ntụ ntụ
molekụla Fnhazi C22H33N4O5P
molekụla Wasatọ 464.503 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 464.219 g / mol
Agba White na-acha ọcha
Fasoracetam Antinye A na-eji ya maka ịgwọ ọrịa ndị ọzọ gụnyere nsogbu nrụgide post-traumatic (PTSD), ọrịa Alzheimer na nsogbu ndị metụtara afọ.
raw NSI-189 phosphate ntụ ntụ (1270138-41-4)
NSI-189 phosphate ntụ ntụ (1270138-41-4) Mechanism of actions?
Usoro usoro nke NSI-189 phosphate na-anọgide na nzuzo nzuzo. E kwuwo na NSI-189 na-ejikọta glucocorticoid na nkwụnye ụbụrụ. Glucocorticoid na-enweta ihe nkwụnye ike nwere ike ịbụ ụdị nzaghachi na-adịghị mma nke na-ebelata mgbasa cortisol. Cortisol bụ hormone nchekasị na-akpata ịda mbà n'obi na nsogbu ndị ọzọ na-akpata neuropsychiatric.
uru of NSI-189 phosphate ntụ ntụ (1270138-41-4)
NSI-189 bụ onyinye efu nke Neuralstem na-amụ ugbu a iji jiri ya mee ihe ọtụtụ ọrịa uche dịka ịda mbà n'obi na ọrịa na-adịghị na-agwọ ọrịa.
-atụ aro NSI-189 phosphate ntụ ntụ (1270138-41-4) Ọgwụgwọ
N'ihi eziokwu ahụ bụ NSI-189 phosphate ntụ ntụ ka bụ ọgwụ na-egosi ọgwụ, ọ kabeghị aka edozi. Otú ọ dị, mgbe a na-anwale ndị ọrịa, ha nyere 40mg, 80mg, na 120mg kwa ụbọchị kwa ụbọchị karịa ụbọchị 28. N'ime oge a, ndị ọrịa ekwughị ihe ọ bụla dị mkpa ma ọ bụ mmetụta ndị ọzọ, ma chọpụta NSI-189 phosphate nke ọma. Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ịda mbà n'obi na mgbaàmà obi mgbaàmà maka ndị ọrịa na-ewere 40mg na 80mg, ma ọ bụghị maka ndị na-ewere 120mg kwa ụbọchị. Nchọpụta mbụ nke ule ndị ahụ na-akwado echiche ahụ na NSI-189 phosphate nwere ike ịgwọ ụwa. Ka o sina dị, nnyocha ndị ọzọ gbasara usoro ọgwụgwọ na usoro omume nke NSI-189 phosphate dị mkpa iji nyere aka gosi nkwalite mbụ ma nyere aka mee nkwubi okwu.
mmetụta of NSI-189 phosphate ntụ ntụ (1270138-41-4)
Ihe ndị a na - egosi na ọ bụ ọnụ mmiri, ntụpọ, isi ọwụwa, ụra, ụra, ike ọgwụgwụ, ịda mbà n'obi, ụra nke ọma, nrọ nrọ / nrọ, parathesia, insomnia, hyperthermia, ọgbụgbọ, mgbu anụ, na ọkụ ọkụ.